လူတှကေ လှယျလှယျလေးရရငျ တနျဖိုးမထားကွဘူးလေ – Shinyoon
လှယျလှယျရရငျ . . .လူတှကေ တနျဖိုးထားရကောငျးမှနျး နားမလညျကွတော့ဘူး ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အခဈြနဲ့ စတေနာတှေ ထိပျဆုံးက ပါတယျ ။ ကိုယျက လိုမယျထငျလို့ပေးလိုကျပမေယျ့ တဈဖကျက ပေါနလေို့ပေးတယျလို့လှယျလှယျလေး သဘောထားလိုကျကွတာလေ ။ တနျဖိုးရှိပါလား တနျဖိုးထားရမှာပါလို့ မတှေးမိတော့ဘူး ။
ဒါပမေယျ့ …ဝမျးမနညျးပါနဲ့ ကိုယျ့မတ်ေတာတှေ စဈမှနျရငျ တဈနကေ့ရြငျရောငျပွနျလာမှာပါ ။ ရောငျပွနျလာမယျဆိုတာ ကိုယျပေးလိုကျတဲ့လူဆီကနေ ပွနျပွီးတနျပွနျလာလိမျ့မယျလို့တော့ တဈထဈခကြွီး မတှေးစခေငျြဘူး သခြောပေါကျ တနျပွနျလာပါလိမျ့မယျ ကိုယျပေးလိုကျတဲ့လူဆီက ဖွဈခငျြမှ ဖွဈမှာပေါ့ ။
လူတှကေို တဈခုတော့ သိစခေငျြတယျ အကူအညီပေးလိုကျတယျဆိုတိုငျး အရမျးကို အဆငျပွနေလေို့မဟုတျပဲ တဈခါတဈလကေိုယျကိုယျတိုငျ ဒုက်ခဖွဈခံပွီး ကူညီပေးလိုကျတာတှမှေ အမြားကွီးပါ ။ ကိုယျက သူအဆငျပွပေါစတေော့ဆိုပွီး ကူညီလိုကျပမေယျ့ နောကျဆုံး တကယျအဆငျမပွဖွေဈသှားတာက ကိုယျကိုယျတိုငျဖွဈသှားတယျဆိုတဲ့စကား သိပျကိုမှနျပါတယျ အဲ့လိုပုံစံမြိုးနဲ့ ဘဝမှာ ခကျခဲရပေါငျးလဲ တျောတျောလေးကို မြားနပေါပွီ ။
အခဈြ . . . ဒီတဈခုက ပိုဆိုးတယျ မာနတှေ ခပြွီး ခဈြပဈလိုကျတာ သူမှသူဖွဈတဲ့အထိ ခဈြပဈလိုကျကွတာပေါ့ ။ နောကျဆုံး ကိုယျဆိုတာ သူ ဂရုမစိုကျလဲ အနားနားရှိနမှောပဲဆိုပွီး လှယျလှယျလေး တှေးပဈလိုကျကွတယျလေ ။ သူ့အတှကျ ကိုယျက တနျဖိုးထားပေးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့လှယျလှယျလေးတှေးပဈလိုကျတာပေါ့။ သူ့ဘကျစမချေါလဲ ကိုယျ့က လာပွီးချေါလာလိမျ့မယျ ကိုယျစိတျဆိုးနလေဲ အလိုလိုစိတျကောကျပွသှေားလိမျ့မယျဆိုပွီး သူ့ခေါငျးထဲ စှဲသှားခဲ့တာ
နောကျဆုံး ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ ကိုယျပဲနာကငျြရတာပါလဲ ဘယျသူမှားလဲလို့တှေးတဲ့အခါ ပေါပေါပဲပဲ ပေးခဲ့မိတဲ့ကိုယျပဲ မှားတာပေါ့ ။ နောကျဆို . . . ဒီထကျပိုပွီး ဆငျခွငျမှ ရတော့မယျ ။ ကိုယျဘယျလောကျပဲ ခဈြနပေါစေ ကိုယျခဈြတာရဲ့ တဈဝကျလောကျပဲ ပွတော့မယျ ။ ကိုယျဘယျလောကျပဲ သနားနပေါတယျ တကယျခကျခဲမှပဲ ကူညီပေးတော့မယျ လူတှကေ လှယျလှယျလေးရရငျ တနျဖိုး မထားတတျကွဘူးလေ ။
လွယ်လွယ်ရရင် . . .လူတွေက တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း နားမလည်ကြတော့ဘူး ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အချစ်နဲ့ စေတနာတွေ ထိပ်ဆုံးက ပါတယ် ။ ကိုယ်က လိုမယ်ထင်လို့ပေးလိုက်ပေမယ့် တစ်ဖက်က ပေါနေလို့ပေးတယ်လို့လွယ်လွယ်လေး သဘောထားလိုက်ကြတာလေ ။ တန်ဖိုးရှိပါလား တန်ဖိုးထားရမှာပါလို့ မတွေးမိတော့ဘူး ။
ဒါပေမယ့် …၀မ်းမနည်းပါနဲ့ ကိုယ့်မေတ္တာတွေ စစ်မှန်ရင် တစ်နေ့ကျရင်ရောင်ပြန်လာမှာပါ ။ ရောင်ပြန်လာမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့လူဆီကနေ ပြန်ပြီးတန်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ တစ်ထစ်ချကြီး မတွေးစေချင်ဘူး သေချာပေါက် တန်ပြန်လာပါလိမ့်မယ် ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့လူဆီက ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပေါ့ ။
လူတွေကို တစ်ခုတော့ သိစေချင်တယ် အကူအညီပေးလိုက်တယ်ဆိုတိုင်း အရမ်းကို အဆင်ပြေနေလို့မဟုတ်ပဲ တစ်ခါတစ်လေကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခဖြစ်ခံပြီး ကူညီပေးလိုက်တာတွေမှ အများကြီးပါ ။ ကိုယ်က သူအဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီး ကူညီလိုက်ပေမယ့် နောက်ဆုံး တကယ်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကား သိပ်ကိုမှန်ပါတယ် အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဘ၀မှာ ခက်ခဲရပေါင်းလဲ တော်တော်လေးကို များနေပါပြီ ။
အချစ် . . . ဒီတစ်ခုက ပိုဆိုးတယ် မာနတွေ ချပြီး ချစ်ပစ်လိုက်တာ သူမှသူဖြစ်တဲ့အထိ ချစ်ပစ်လိုက်ကြတာပေါ့ ။ နောက်ဆုံး ကိုယ်ဆိုတာ သူ ဂရုမစိုက်လဲ အနားနားရှိနေမှာပဲဆိုပြီး လွယ်လွယ်လေး တွေးပစ်လိုက်ကြတယ်လေ ။ သူ့အတွက် ကိုယ်က တန်ဖိုးထားပေးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့လွယ်လွယ်လေးတွေးပစ်လိုက်တာပေါ့။ သူ့ဘက်စမခေါ်လဲ ကိုယ့်က လာပြီးခေါ်လာလိမ့်မယ် ကိုယ်စိတ်ဆိုးနေလဲ အလိုလိုစိတ်ကောက်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီး သူ့ခေါင်းထဲ စွဲသွားခဲ့တာ
နောက်ဆုံး ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ကိုယ်ပဲနာကျင်ရတာပါလဲ ဘယ်သူမှားလဲလို့တွေးတဲ့အခါ ပေါပေါပဲပဲ ပေးခဲ့မိတဲ့ကိုယ်ပဲ မှားတာပေါ့ ။ နောက်ဆို . . . ဒီထက်ပိုပြီး ဆင်ခြင်မှ ရတော့မယ် ။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်နေပါစေ ကိုယ်ချစ်တာရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲ ပြတော့မယ် ။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ သနားနေပါတယ် တကယ်ခက်ခဲမှပဲ ကူညီပေးတော့မယ် လူတွေက လွယ်လွယ်လေးရရင် တန်ဖိုး မထားတတ်ကြဘူးလေ ။